जाडो मौसममा हृदयाघातको खतरा झन् बढि ,यसबाट बच्न के गर्ने ? – " कञ्चनजंगा News "
जाडो मौसममा हृदयाघातको खतरा झन् बढि ,यसबाट बच्न के गर्ने ?
No Comments on जाडो मौसममा हृदयाघातको खतरा झन् बढि ,यसबाट बच्न के गर्ने ?
के तपाईंलाई चिसोको समयमा रक्तचाप (ब्लडप्रेसर) बढेको छ ? यदि छ भने समयमै चिकित्सकसँग जाँच गर्नुहोला । बेवास्ता गर्नुभयो भने ज्यानै पनि जान सक्छ । जाडोमा अन्य समयभन्दा ३० प्रतिशत बढी हृदयाघातको सम्भावना रहने भन्दै चिकित्सकले सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएका हुन् । चिसो भएपछि रगतको नली खुम्चँदै जाने र रक्तचाप बढ्ने भएकाले विशेष सावधानी अपनाउन चिकित्सकले सुझाव दिएका हुन् ।
हिजो आज विहानको मौसम अत्यधिक चिसो हुने भएकोले मर्निङ वाकमा सकभर कोही पनि ननिस्किएको राम्रो। अझ मुटुका विरामी त चिसोमा निस्कनै हुँदैन। किनकि चिसोको कारणले मुटुका रक्तनलीहरु खुम्चिन गई रगत प्रवाहमा असर पर्छ। जसले गर्दा हृदयघात हुने सम्भावना हुन्छ।
उच्चरक्तचापका विरामीहरु चिसो मौसममा थप सर्तक हुनुपर्छ। चिसो मौसममा स्वभावैले रक्तचाप बढ्ने हुनाले हृदयघातको खतरा पनि बढ्छ। तसर्थ यस्ता विरामीहरुले नियमित रुपमा रक्तचाप परिक्षण गरी रक्तचाप नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ। यदि रक्तचाप बढेको खण्डमा तत्काल चिकित्सकको परामर्श लिइ औषधिद्धारा नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
उच्च कोलेष्ट्रेरोल पनि हृदयघात गराउने प्रमुख कारक हो। जाडोको बेलामा रगतमा कोलेस्ट्रेरोलको मात्रा बढी देखिने हुँनाले यसलाई घटाउने वा नियन्त्रणको आवश्यकता अनिवार्य छ। त्यसका लागि फाइबरयुक्त खानाको साथै शारीरिक व्यायममा ध्यान दिनुपर्छ।
मुटुरोग र सुगरबीच अन्योन्यास्रित सम्वन्ध हुन्छ। मुटुरोगीलाई जस्तै सुगरका बिरामीलाई पनि हृदयघातको सम्भावना उत्तिकै हुन्छ। गर्मीमा भन्दा जाडो मौसममा धेरै खान रुचि हुने र कसैकसैले यसैको फाइदा उठाउदै अनियन्त्रित रुपमा भोजन गर्ने प्रचलनले सुगरको मात्रा ह्वात्तै बढ्छ। यसको असर मुटुमै गई ठोक्किन्छ। त्यसैले मुटुरोगीहरुले सुगरको पनि परिक्षण गरि राख्नुपर्छ।
चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग त्यागौँ
कतिपयले जाडो छल्ने बहानामा चिसो मौसममा झनै बढी चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। तर त्यो सर्बथा गलत हो। किनकि त्यसै खुम्चिएको रक्तनलीहरुलाई यसको सेवनले थप साँघुरो बनाउछ जसले गर्दा हृदयघातको सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले मुटुरोगबाट बच्नका लागि सकेसम्म कहिल्यै चुरोट तथा सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नगरेको राम्रो।
कतिपयले जाडो मौसममा शरीर तताउन भन्दै अत्यधिक मदिराको सेवन गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यो पनि स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ। अत्यधिक मदिराले कोलेष्ट्रोरोल बढ्न जान्छ। अझ अधिकांशले मदिरासंगै अत्यधिक मासु तथा चिल्लो पदार्थको सेवन गर्ने गर्दछन यसले थप असर पार्दछ।
औषधि बन्द नगर्नुहोस
कतिपयले प्रेसर र सुगरका औषधिहरु अनियमित रुपमा लिने गरेको पाइन्छ। तर यस्तो गर्नु आफैलाई खतरामा धकेल्नु हो। मुटु, सुगर तथा दमका विरामीका लागि जाडोको समय प्रतिकुल नै हुने भएकोले यस्तो बेलामा औषधिहरुको नियमीत सेवन गरौँ।
← शारीरिक सम्बन्ध राख्न इच्छा हुदाँ महिलाले देखाउने ५ व्यवहार ! → प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहालले भाइ प्रकासको मृत्युसंग जोडेर ओलीलाई किन लेखिन यस्तो पत्र ?